E | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » E	6
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 31, 2015 in Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary |6comments
နိဂုံးဆိုတာ နိဒါန်းရဲ့ အစ… လို့ ပြောရမလိုပါပဲ…
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အဆုံးသတ်အချိန်ဟာ….နောင်နှစ်သစ်တစ်ခုအတွက် အစဆုံးသော အချိန်…
.အေးလေ… ဒီနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် စက္ကန့်အပြီးမှာ ဟောဒီကမ္ဘာကြီးက ပျက်စီး အဆုံးသတ်သွားမှာမှ မဟုတ်တာ။
.နောက်နှစ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကို ဖျတ်ခနဲ…ကူးပြောင်း ရောက်ရှိသွားမှာပဲ မဟုတ်လား။
ဒီတော့ ၂၀၁၅ ရဲ့ နိဂုံးဟာ…၂၀၁၆ ရဲ့ နိဒါန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ… စိတ်သစ်လူသစ် အားအသစ်တွေနဲ့… ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အဖြာဖြာကို သစ်လွင်တောက်ပစွာ
ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ…လို့… မြန်မာပြည်သူား အာလုံးအတွက ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာနဲ့…လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ကောင်းကျိုးလိုရာ ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တွေ ရနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း…
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွင်းက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက် ကြိုးစား ရုန်းကန်ပါစေ…
ရုန်းကန်ရသလောက် ထိုက်တန်တဲ့ ရလဒ်ကို ပြန်ရနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းမရှိရင်…
အဲဒီအခွင့်အလမ်းကို တစ်ခုခုနဲ့ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားရင်… ဘာမှ အကျိုးမရှိပဲ… ဒုံရင်း အနေအထားထက် နိမ့်ကျနွမ်းပါးသွားမှာပဲ… ။
လွန်ခဲ့နှစ်များဆီမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထားကို လည်ပြန်ကြည့် ကြည့်တဲ့အခါ….
၂၀၁၀ ခုနှစ်လောက်အထိ…ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများထက် များစွာ နိမ့်ကျ စုတ်ပြတ်သော…ဒုံရင်း အနေအထားပါပဲ…
အဲဒီဒုံရင်း အနေကနေမှ….ထပ်ခါ ထပ်ခါ….တအိအိ…ထိုးဆင်းကျနေသေး….
၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကျတော့… စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကနေ…
အပ်ချလောင်းဆိုပြီး အရပ်သားအစိုးရ အဖြစ်လဲ မျက်လှည့်ပြလိုက်ပြီး…
(ပွက်ပွက်ဆူပြီး ဝေကျတော့မယ့် ရေနွေးအိုးကြီးကို အဖုံးခဏ ဖွင့်ပေးလိုက်သလိုမျိုး) ရောင်နီဦးလေး လှစ်ခနဲ….ဖွင့်ချပြ….
ထူးခြားစွာသော …ကောင်းမွန်စွာသော အပြောင်းအလဲကို ပေးတော့မလိုလိုနဲ့….
ထူးမခြားနားသော ဘီလူးဆိုင်းတီခြင်းကိုသာ … ပြည်သူများ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ရ….
ဘယ်တုန်းကမှ…အရာသွင်း မခံခဲ့ရရှာတဲ့ ငါတို့ လူ့အခွင့်အရေးလေးများ…
ဒီ (စစ်ဝတ်တန်ဆာချွတ်/အရပ်ဝတ်လဲထားတဲ့) အစိုးရလက်ထက်မှာ
အထိုက်အလျောက် ရတော့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့… ရသင့် ယူသင့် ရှိသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ…တောင်းဆိုမိကြ….
ဒါပေမယ့်… ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သွားနေပါပြီ…ဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲ…
.ပြည်သူပိုင်သတင်းစာတွေထဲမှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို မြန်မာပြည်သူတွေ စားသုံးနေကြရပါပြီ…ဆိုတဲ့
အစိုးရအာဘော်တွေ တလုံးတခဲ ထည့်ရေးပြနေတဲ့ နိုင်ငံထဲ….
ကျနော်တို့ရဲ့ ကျောင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ…. ပညာရေး ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မိလို့…
အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခံရ… ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရ…
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ….ဆိုပေမဲ့… ကိုယ့် လယ်ယာ/မြေကို ကျူးကျော် အသုံးချသူတို့ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့အရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မိလို့… ပစ်သတ်ခံရ…ဖမ်းဆီးခံရ…
လူဆိုးလူမိုက်များ..လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အကြိမ်ကြိမ်ကြောင့် အပြင်လောက ပြန်ရောက်….
.နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူလယ်ကောင်မှာတောင်… ကိုယ့်ဘေးနားကပ်လာသူကို မယုံရဲစွာ အကဲခတ်…သတိကြီးစွာထားပြီး ရင်ထထိတ်ထိတ် သွားလာလှုပ်ရှားကြရတဲ့အထိ…
တရားခံမပေါ်သော လူသတ်မှုများ… ခိုးမှု လုယက်မှုများ…
တရားခံပေါ်သော်လည်း တရားမျှတမှုမရှိသော စီရင်ချက်ချမှုများ…
အလုပ်မည်မည်ရရ မလုပ်သော/ လူ့စွမ်းအားလည်ပတ်မှု ကောင်းစွာ မရှိသော ဌာနဆိုင်ရာများ… လာဘ်စားမှုများ ….
ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မမျှတသော ကုန်ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှု… ဈေးကွက်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနဲ့…
တိုင်းပြည်ပျက်တာနောက် ငါတို့ချမ်းသာဖို့ကအရင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ထင်ရာဆိုင်းမှုများ…
၂၀၁၀ အလွန် ကာလများကို အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ပြီး…
ဒါပေမဲ့…နှာခေါင်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီး အသက်ရှူနေရသလိုမျိုး… အသက်ဝဝ ရှူခွင့်မရသေးဘူး…လို့ ပြန်ဖြေကြရမှာပဲ… ။
၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့… တိုင်းပြည်အတွင်း လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားတယ်…
အနှစ်နှစ်အလလ ချုပ်ကိုင် ဗိုလ်ကျခဲ့သူတို့ကို အပြီးအပြတ် ဖြုတ်ချ ထားရစ်ခဲ့နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး အခြေအနေ ပေးလာခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်… အဲဒီ အခွင့်အရေးကို စီမံဖန်တီးပေးသူတွေကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ပလန်များအောက်မှာ
လူးကာလွန့်ကာနဲ့ ခက်ခဲစွာ ရုန်းထွက်ရတာမို့ အပြီးအပြတ်တော့ ဖြုတ်မချနိုင်ခဲ့…
.ပြည်သူ မလိုလားသော အစိုးရတစ်ရပ်ဆီမှသည်…ပြည်သူလိုလားသော
(အင်မတန် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးအောင် ဖန်တီးထားသည့်အခြေအနေကြားမှ
ပြည်သူများက ကြိုးစားအားထုတ်ကာ တင်မြှောက်လိုက်သော) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်မည့်အစိုးရသစ်ကို… ပိုင်ဆိုင်ရတော့မည်။
အာဏာ မလွှဲခင်စပ်ကြားအချိန်ကာလကလေးမှာတောင် အစိုးရဟောင်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေ…
မတော်မတဲ့ တောင်းဆိုမှုများ…ကြိုတင်စီမံမှုများကို မြင်တွေ့ရသောအခါ…
”နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ပြည်သူကို ဒီလို…ကပ်ဖဲ့ ဒုက္ခပေးပြီး.. သူတို့ကိုယ်ကျိုးကိုသာသူတို့ကြည့်တဲ့အစိုးရ” မဟုတ်တန်လောက်ပါဘူး…လို့….အားကိုးမိကြပြီ။
.မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း … သန့်ရှင်းသော အစိုးရအဖွဲ့ကို တကယ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရကြပါစေ…
၂၀၁၅ ဆိုတဲ့ နှစ်ဟောင်း ကုန်လေပြီ…
၂၀၁၆ ဆိုတဲ့ နှစ်သစ်မှစ….နောင်အနာဂတ်ကာလမှာ…မြန်မာပြည်… ဆင်းရဲတွင်းထဲကနေ…
တစ်ထစ်ချင်း….တက်ရောက် လွတ်ကင်းဖို့… မျှော်လင့်စရာ ရှိပါသည်။
နှစ်ဟောင်းနှင့်အတူ…ပြည်သူ့မျက်နှာ မကြည့်သော အုပ်ချုပ်သူတို့… ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါစေ…
၂၀၁၅ သည်… မကောင်းသော အုပ်ချုပ်/စီမံမှုများ၏ အဆုံးသတ် (The end… )ဖြစ်ပြီး…
၂၀၁၆ သည်… ကောင်းသော အုပ်ချုပ်/စီမံမှုများ Endurance = သက်တမ်းကြာရှည်စွာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းသော
အတွန်းအတိုက် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံနိုင်ရည် ရှိသော အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ကို ရရှိမည့် နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေတော့လို့….သာ….
E-မြောက်မြောက် says: ဒို့ဘကြီးကိုများ ပြည်သူတွေကို မကြည့်ဘူးလေး ဘာလေးနဲ့
လမ်းတွေ ပိတ်အောင် ကားတွေ သွင်းကြ
ထောင့်ငါးရာနဲ့ ကဒ်ကြီးသုံးကဒ် အပြိုင်သုံးခွင့်လဲရ
ဒါဒေါင် အကောင်းမမျင်ကျဘူးလား ဟွင်
alinsett says: ကားတွေ မသွင်းရဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံ ရှိလားငင်……
ဒါပေမယ့်..သွင်းသလောက် ကားတွေရဲ့ အခြေအနေကို ကြိုတွက်ပြီး..
လမ်းမပိတ်အောင် ဖောက်ပေးရမယ့် စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်…အစိုးရမှာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ တာဝန်မှ မယူနိုင်ပဲ…
ကားတွေ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတယ်လေ…ဆိုတာလောက်နဲ့..လက်မထောင်နေလို့ မရဘူး..ထင့်…။
ကားတွေ တင်သွင်းခြင်းကိစ္စမှာလည်း…ရေဆုံးရေဖျား လိုက်ကြည့်ရင်…
(ဥပမာ… အိမ်စီးကား တင်သွင်းမယ့် ပြည်သူတချို့… ကားပါကင်ပါမစ် လျှောက်တယ်…။
ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝန်းထဲ…ကားရပ်လို့ရကြောင်း အခိုင်အမာတင်ပြတယ်။ လာရောက်စစ်ဆေးတာလည်း ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့… ပါမစ် ကျမလာဘူး။ ပါမစ်တစ်စောင် ဆယ့်ငါးသိန်းနဲ့ ရောင်းစားနေတဲ့…ပွဲစားတွေကျတော့..
ပါမစ်တွေ.. ရလိုက်တာမှ…ဝက်ဝက်ကွဲ…။ ဆိုတော့… ကိုယ့်အသုံးလိုမှုကြောင့် ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝန်းကို ပြပြီး ပါကင်ပါမစ်လျှောက်သူများက….ဘယ်ကဘယ်လို ရထားမှန်းမသိရတဲ့ ပွဲစားတွေဆီက…ဈေးကြီးပေးကာ..ပါမစ်ကို ဝယ်ရ… )
ဆိုတော့…ကားတင်သွင်းခြင်းကိစ္စဟာ..ပြည်သူကို တကယ် စေတနာ ထားမထား..
တကယ် မှန်ကန်တိကျ သမာသမတ်ကျစွာ လုပ် မလုပ်…. ————————————–
ထောင့်ငါးရာ နဲ့..ရတယ်..။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာပါ။
တစ်မိနစ်…၂၀ ထိ ဖြစ်လာတယ်.. ။ ကျေးဇူးတင်စရာပါ။
အရင်က…ဖုန်းကတ်တစ်ကတ်ကို သိန်း ဆယ်ဂဏန်းအကျော်ထိ…ပြည်သူဆီက လည်ပင်းညှစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အတိတ်ကို စိတ်မနာနဲ့..မေ့ပစ်…ကျေးဇူးတင်အုန်း…ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့… သူများနိုင်ငံမှာ….. ဗီဒီယိုကော…ခေါ်ဆိုမှုတွေ..အသံမက်ဆေ့ပေးပို့နိုင်မှုတွေနဲ့…
အရည်အသွေးပြည့်မှီစွာ..ပြည်သူအတွက် ဖန်တီးပေးနေကြပြီ… ကျနော်တို့ကို ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကတော့… ဖုန်းတစ်ခါပြောရင်…အသံတွေပြာအက်…
.ပြောနေရင်းနဲ့… အသံကပျောက်သွားတာတို့.. ကျွိ ကျွိ ကျလိကျလိနဲ့..ဘာသံတွေမှန်းမသိ.. ဝင်လာတာတို့.. ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပတို့… ကိုယ်ပြောတာ သူမကြား..သူပြောတာ ကိုယ်မကြားတို့…
အဲ့လို…အရည်အသွေးမရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေ ဖန်တီးပေးတာလောက်နဲ့…
အသံကောင်း ဟစ်တာကို ကျေးဇူးတင်ရမှာလား… .ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. အသံကောင်းဟစ်ဖော် ရတဲ့အတွက်ရယ်…
.စေတနာမပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ..အဖြစ်သဘောလောက် လုပ်ပေးတာ…အတွက်….ရယ်… ——————————–
ကျန်တာတွေလည်း… အတိုက်အခံဘက်က ပြောမယ်ဆိုရင်… ရသေးတယ်။
.ပြောရင်လည်း… စေတနာမပါတဲ့ တာဝန်ယူမှု…တာဝန်အပြည့်အဝ မခံနိုင်မှုတွေချည်း…ထိုင်ပြောသလိုဖြစ်မှာ… ဆိုတော့….
အကောင်း (တကယ့် အကောင်း)ကို မစီမံ မဖန်တီးပေးနိုင်သေးသ၍….
အဆိုးမြင် ထဲက..လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါကြောင်း…. ဒီနေ့အချိန်ထိ…
.ပြည်သူကို လိုလားသော… အစိုးရသစ်ကိုသာ…မျှော်နေရဦးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…
E-မြောက်မြောက် says: အောင် မာ အောင် မာ
ဒို့ဘကျီးက နဖူးပြောင်သလို အဝှါလဲ ပြောင်သကွ
ပြောင်မြောက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ကွ ဟွင်း
နိုင်ငံဒကာ မျက်နပြောင်တိုက် ပိုက်ဆံလိုက်ချီးပေးခဲ့တဲ့ မျက်နှာမှမထောက်
စေဒနာမပါဘူးလေး ဘာလေး နဲ့
ဒို့ရွာသူတွေတောင် စုဗူးပေါက်တဲ့လူပေါက်နဲ့ မဟုတ်လား
နောက်ခါ ဒို့ဘကျီးကို စော်ဒကား မော်ဒကားလုပ်လို့ကဒေါ့
ရွာကို မီးရှို့ပြီး ဂါယာရှော့ခ် ကိုလွှဲချပြိုက်မယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိုင်ငံက ယူထားတာတွေ ပြန်မအမ်းနိုင်ရင်တောင်
ဒီလူဂျီးတွေ မြန်မြန် END ပါစေ ….
alinsett says: .သူတို့… အိတ်ထဲက ဘာပြန်ရမလဲ..လို့ကို…ဒီပြည်သူတွေက မမျှော်လင့်တော့တာ…
အဲ့ထက် ပိုသိနေတာက… သူတို့သည်… တိုင်းပြည်အတွက်…စေတနာပါသော လုပ်ဆောင်မှုများထက်…
သူတို့ကိုယ်သူတို့သာ..စေတနာထည့်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများသာ လုပ်တတ်သည်…ဆိုတာပဲ။ ဆိုတော့… မအမ်းရင် နေပါ… End…သွားရင်ကိုပဲ…. ဝဋ်ကြွေးတွေ.. ကြေသလို ခံစားကြရမှာပါလို့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
အောင် မိုးသူ says: End is Start.